खानपिन Archives - Eagronews
April 13, 2022 eagronewsLeaveaComment on यी हुन इम्यूनिटी पावर बढाउने ‘सुपर फूड’
खानपानमा ध्यान नदिंदा इम्यूनिटी पावरमा कमी आउँछ । अहिले केही रिपोर्ट्सहरूले इम्यूनिटी पावर कमजोर भएकाहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा बढी हुने जनाइरहेका छन् । खानपानमा विशेष ध्यान दिंदा इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार इम्यूनिटी पावर बढाउनका लागि खानामा केही विशेष परिकार समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । इम्यूनिटी पावर बढाउने ‘सुपर फूड’ […]
April 13, 2022 eagronewsLeaveaComment on भान्साका मसलाको औषधिय गुण
तरकारीलाई स्वादिलो बनाउनका लागि धेरै प्रकारका मसलाहरूको प्रयोग गरिन्छ । यस्ता मसलाहरूले तरकारीको स्वाद मात्र बढाउने नभई स्वास्थ्यमा पनि निकै फाइदा पु¥याउँछन् । बेसार, धनियाँ, जीरा, ज्वानो, ल्वाङजस्ता मसलाले स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा पु¥याउँछन् । बेसार :- सारले रगत सफा गर्छ । कफ कम गराउँछ । चिसोबाट बचाउँछ । यसमा एन्टी सेप्टिक, एन्टी बायोटिक, एन्टी एलर्जिक […]
काठमाडौँ : कर्कलोको नाम लिएपछि धेरैले ‘त्यस्तो पनि तरकारी हुन्छ र ? छ्या’ भनेर नाक खुम्च्याउँछन् । कर्कलोको पौष्टिक तत्त्वबारे थाहा पाए भने आहा भनेर खान थाल्छन् कि ! ऋषि पञ्चमीका दिन बिहान पूजा गरेपछि महिलाले कर्कलो र भात खाने चलन छ । व्रतसम्बन्धी दर्शनको म विरोधी हुँ, तर त्यो दिन पकाइने कर्कलो र भात म मिठो मानेर […]